Maitiro Ekumhanyisa iyo A / B Bvunzo pane Yako Inosvika Peji | Martech Zone
Maitiro Ekumhanyisa iyo A / B Bvunzo pane Yako Inosvika Peji
Chipiri, Zvita 16, 2014 Chipiri, Zvita 16, 2014 Douglas Karr
Lander ndeye inodhura peji yekumhara peji chikuva ine yakasimba A / B kuyedza kunowanikwa kune vashandisi kuti uwedzere yako ekushandurwa mitengo. Kuongorora kweA / B kunoenderera kuve nzira yakasarudzika inoshandiswa nevashambadzi kusvina dzimwe shanduko kubva kunzira iripo - nzira huru yekuwana bhizinesi rakawanda pasina kushandisa mari yakawanda!
Chii chinonzi A / B Kuedza kana Kupatsanura Kuedza
Kuongorora kweA / B kana kupatsanura kuyedza sezvazvinonzwika, kuyedza kwaunoyedza maviri akasiyana mavhezheni eLanding Peji panguva imwe chete. Chaizvoizvo hachisi chinhu kunze kwekushandisa kwenzira yesainzi kune ako epamhepo ekushambadzira.
Imwe kiyi yekuona kuti une data rakakodzera kutsigira mhedzisiro iri kuyera huwandu hwevashanyi uye shanduko, uye kuverenga kuti kana kwete kana pane vimbiso yeiyo bvunzo. KISS Metrics inopa yakanaka primer pa Kuedza kweA / B Kunoshanda pamwe nechishandiso che kuverenga kukosha yemhedzisiro.
Mune yavo yekudyidzana A / B Kuyedza infographic, Landers inofamba mushandisi kuburikidza nekubudirira kuyedza yavo yekumhara peji uye inopa kuzivisa pamhedzisiro:
Nguva dzose edza chinhu chimwe pabvunzo senge dhizaini, musoro wenyaya, musoro wediki, kufona-ku-kuita, mavara, zvipupuriro, mifananidzo, mavhidhiyo, kureba, chimiro uye nemhando dzakasiyana dzezviri mukati.
Sarudza izvo zvekuyedza nekuvandudza akasiyana mavhezheni zvichienderana nemabatiro emushandisi, maitiro akanakisa, uye kumwe kutsvagurudza. Rangarira, chinhu chimwe chete pabvunzo chinofanira kuiswa uye kuyedzwa.
Mhanya iyo bvunzo kwenguva yakareba zvakakwana kuti uwane huwandu hwesimbiso yemhedzisiro, asi ive shuwa yekupedza bvunzo uye isa yako yekuhwina vhezheni rarama nekukurumidza nekukasira kuti ukwidziridze shanduko.
Nechishandiso chaLander, unogona kugadzira uye kuyedza kusvika kumatatu akasiyana emapeji ega ega ekumhara panguva imwe chete. Izvi zvinoreva kuti iwe unozogona kugadzira akasiyana mavhezheni epasi rako peji pasi peiyo URL.
Tags: ab muedzoLänderkumhara peji bvunzokumhara peji kuyedzakupatsanura bvunzo
Iyo Hwaro hweKubudirira Kwemagariro Ekutengesa Sisitimu
VB Insight: Vanoongorora uye Vanodhura, Chaiyo-Nyika Mishumo
Mar 6, 2015 pa 2: 25 PM
Hi Douglas! Ndatenda nekutsanangura maitiro ekuita bvunzo yeAB yePeji Yekumisikidza uchishandisa Lander. Tsananguro huru uye mazano anobatsira! Isu tinokoka vaverengi vako kuti vaedze yedu 30-Mazuva Yemahara Muedzo uye kukwidziridza avo eKudzika Mapeji. Kwaziwai!